Rant: Dowladda Mareykanka waxay burburin doontaa Ganacsiga Internetka | Martech Zone
Rant: Dowladda Mareykanka waxay burburin doontaa Ganacsiga Internet-ka
Talaado, Maarso 26, 2013 Axad, Oktoobar 4, 2015 Douglas Karr
Dhaqaalaha ayaa ku burburay Mareykanka. Iyada oo la adeegsanayo qarash gareynta diiwaanka, farqiga hantida ayaa sii kordhaya, faqriga ayaa sii kordhaya, tirada muwaadiniinta ku tiirsan shaqo la'aanta, kaararka cuntada, naafada ama daryeelka ayaa ku jira heerarka rikoorka. Waxaa jira kaliya hal qeyb oo dhaqaalaha Mareykanka ah oo kobcaya - oo leh shaqooyin mushahar fiican qaata, shaqooyin badan oo furitaan ah, tan maalgelin maalgashi, iyo iibinta sii kordheysa. Qeybtaasi waa internet ah.
Iyada oo tafaariiqleyaasha waaweyn ee waaweyn ay silcayaan iyo dawladda lacag ku bixinta barashada xubinta taranka dumarka, mustaqbalka kor u kaca ecommerce wuxuu umuuqdaa mid liita sidii Guurtida kaliya ayaa ansixiyay biil cashuurta Iibka Internetka. Marka… qayb ka mid ah dhaqaalaha oo aan dhibaataysnayn ayaa hadda ugu dambayntii ku biiri doonta aag kasta oo kale oo dhaqaalaha ka mid ah caawiyay dowladda federaalka.
Haddii sharcigan la meel mariyo, waa bilowgii dhammaadka barwaaqada nidaamkeenna suuqa xorta ah ee Internetku uu ina siiyay 20-kii sano ee la soo dhaafay. Ganacsatada tafaariiqda weyn ee bilyaneerka ah ee iyagu lahaa, gacanta ku hayay isla markaana maareeyay qiimaha iyo qaybinta badeecadaha iyo adeegyada ayaa hadda ka lumaya ku xirnaanshahooda internetka ... wayna qaylinayaan. Iyaga ayaa ah kuwa hormuudka u ah cadaadiska madaxdeenna inay cashuur ka qaadaan internetka.
Qof walba wuu u furan yahay inuu ku tartamo internetka
Waa inay xishoodaan. Ka fikir waxaas… iyagu maahan wax uun laakiin barta wax lagu qaybiyo oo ku kordhisa korka qiimaha badeecadaha inta aynaan helin. Waan ku kalsoonahay hadaad dib u milicsato taariikhda in tafaariiqlayaashu ay u ooyeen cadaalad daro markii Sears Catalog waxay u martay albaabbada macaamiisha waxayna hadda heli karaan badeecado iyo alaabo jaban oo loo maro boostada tooska ah. Ganacsade kasta oo weyn oo tafaariiqle ah wuxuu lahaa lacag iyo fursad uu ganacsigooda ugu wareejiyo internetka. Haddii ay taas ku guuldareysteen, waa inay la macaamilaan cawaaqibka.
Shirkadaha Maxalliga Ah Waa Inay Bixiyaan Canshuuraha Maxaliga Ah
Lahaanshaha dukaanka weyn ee maxaliga ah ku darayaa Kharajka bulshada deegaanka - laga bilaabo kharashka gaadiidka, kharashka taraafikada, booliska iyo kharashaadka caafimaadka, ilaa kharashka korantada… oo ay ku jiraan biyaha, korontada iyo qashinka. Canshuuraha iibka ee gobolka iyo kuwa maxalliga ah ayaa ka dhigaya kharashyadaas gobolka maxalliga ah. Waa nidaam macno samaynaya. Haddii aan wax ku iibsado khadka tooska ah, wax qiimo ah uguma fadhiyaan bulshadayda maxalliga ah. Gaadiidka waxaa bixiya shirkada maraakiibta iyo canshuuraha shidaalka. Looma baahna nalalka taraafikada, qabqabashada dukaamada, qabashada qashinka, looma baahna adeegyo dheeri ah additional nada.
Tafaariiqleyda kama lumayaan Ganacsiga sababo la xiriira Canshuuraha Maxalliga ah
Waxaa waa Faa'iidooyinka ka iibsiga tafaariiqleyda xaafadda… Guryaha ayaan ku kaxeyn karaa alaabada, waxaan isku dayi karaa dharka, waxaan ku dhejin karaa qalab, waxaan ka heli karaa taageerada alaabada, ama waan ku beddeli karaa iibsashada si daahsan. Waxaan inta badan ka dukaameystaa tafaariiqleyda maxalliga ah - laakiin aad uga yar sidii aan ahaan jiray. Internetku wuxuu noqday mid ku habboon. Wax kama iibsado khadka tooska ah maxaa yeelay canshuurta kuma bixiyo halkaas… Waxaan wax kaga iibsadaa khadka tooska ah maxaa yeelay waxaan ka sameyn karaa taleefankayga daqiiqado gudahood. Ma jiro wadid baabuur, baarkin la'aan, sugitaan la'aan safka, raadinta alaabooyin aan dhammaad lahayn, ma jiro macaamiil macmiil leh, ama kuwa riixaya, ama kuwa aan xiiseyneyn, ama gebi ahaanba gargaar la'aan.
Furitaanka Sanduuqa Pandora ee Cashuuraha Deegaanka
Aasaaska canshuuraha ayaa liis garaya 9,600 gobollada canshuurta iibka maxalliga ah. Qiyaas in goob kasta oo ka mid ah e-commerce ay hadda tahay inay barnaamij u sameyso 9,600 canshuuraha maxalliga ah ee kala duwan oo si joogto ah isu beddelaya. Codsi kasta oo mobiil ah wuxuu u baahan yahay dib-u-dhis si loogu sameeyo 9,600 xeerar cashuur oo kala duwan. Bixiyeyaasha 'Ecommerce' waxay u baahan doonaan inay soo xareeyaan canshuuraha deegaan kasta waxay ku ganacsadaan. Waa nuts.
Canshuuraha Maxalliga ah ayaa dili doona Ganacsi
U macasalaamee meherad kasta oo yar oo webka ku taal oo aan la soo geli karin dusha sare ee la xiriira kharashyadan. Sure solutions xalal cusub ayaa isbeddelaya, ganacsiyo cusub oo maareeya diiwaangelinta cashuurta adiga. Laakiin kharashka ayaa lagu dari doonaa alaab kasta oo aad iibsato - marka lagu daro cashuurta iibka ee cusub. Goobaha kaliya ee ganacsi ayaa haray waxay noqon doonaan wiilasha waaweyn ee awooda qarashka oo markii horeba bilaabay qalalaasahan. Ganacsiyada yaryar iyo ganacsatadu way khiyaaneeyeen.
Miyay tani ka dhigi doontaa garoonka ciyaarta cadaalad u dhexeeya dukaamada iyo ecommerce? Ma jiraan wax cadaalad ah oo ku saabsan. Qeybta ugu dambeysa ee dhaqaalaha Mareykanka ee kobcaya waxay hadda kula midoobi doontaa qof kasta oo kale shaqo ka joojinta, maalgashi la'aanta, iyo ka bixitaanka iibka ganacsiga. Oo ay la socdaan tafaariiqda weyn ee horeba ugu sii jeeday jihadaas.
Tags: ecommerceinternetcashuurta iibka internetkacashuurta internetkacashuurta iibka ee deegaanka
Mobilenomics: Haddaadan Moobiil aheyn, Suuq Maheysid
Perforce: Nooca Wax walba
Waxaan u maleynayaa inay tahay inaan bilowno canshuuraha emaylka si aan ugu noqono "cadaalad" xafiiska boostada.